mercredi, 30 novembre 2016 09:13
Andohatapenaka : Mikatona ny « Village de la Francophonie »
Hikatona tanteraka manomboka anio ny « Vohitra Voara » na « Village de la Francophonie » eo Andohatapenaka – Antananarivo. Araka ny fanazavan’i Ntsoa Randriamifidimanana, Ben’ny tanànan’ny « Village de la Francophonie » dia nanenjehana ny Frankofonia fotsiny ihany ny fotodrafitrasa vita teo, ka mbola hasiam-panamboarana mba ho afaka handraisana hetsika ara-toekarena sy sosialy na koa kolontsaina.
mardi, 29 novembre 2016 12:15
Fenoarivo Atsinanana : 500 Ariary ny rano iray « bidon »
Lafo vidy ny rano eto an-tampon-tanànan’i Fenoarivo Atsinanana, renivohitry ny Faritra Analanjirofo. Tsy mampino nefa ny zava-misy, manoatra noho ny any Androy ny vidin-drano. Tafakatra 500 Ariary ny rano iray « bidon » mavo, ambonin’io ny saran’ny fitaterana azy amin’ny kalesy.
mardi, 29 novembre 2016 12:11
Frankofonia : Niafara tamin’ny dia an-tongotra ny an’ny mpiasan’ny RNM sy TVM
Vita tamin-dromoromo ny asa ho an’ny mpiasan’ny RNM sy TVM niantsoroka ny fitateram-baovao nanodidina ny fihaonana an-taompon’ny Frankofonia andiany faha-16 nampiatranoan’i Madagasikara ny 22 ka hatramin’ny 27 novambra 2016. Nimenomenona ireo mpiasa fa na vatsy aza tsy azo hany ka dia an-tongotra no namonjena fodiana ny an’ny sasany, ny asa anefa tsy maintsy natao.
lundi, 28 novembre 2016 22:00
Anjagnoveratra-Sambava : Nodoran’ny olona ny tranon’ilay rangahy namono ny zana-badiny
Nisy nandoro ka may kila forehitra ny tranon'ilay raim-pianakaviana namono nahafaty zazalahikely, izay zanabadiny ihany. Nirahin’ilay rangahy nividy sigara ilay zaza, ka rehefa tsy nahazo izay notadiaviny izy dia nentin-katezerana ary nahavita nandatsaka aina io zana-badiny io. Nalevina tamin'ny 23 novambra teo tao Tsaratanana Anjagnoveratra ny nofomangatsiakan’ity farany. Voatazona tao amin'ny « Poste Avancé » Zandarimaria tao Anjagnoveratra ilay raikely nahavanon-doza natao famotorana ary androany atoandro no natolotra ny Fitsarana Antalaha, ka tamin’izay indrindra no nisy nandoro ny tranony.
lundi, 28 novembre 2016 21:20
Lalana Tsarasaotra-Ivato : Amin’ny oktobra 2017 vao ho azon’ny besinimaro hampiasaina
Hikatona manomboka ny talata 29 novambra 2016 ny lalam-baovao Tsarasaotra-Ivato, namboarina manokana hanenjehana ny fandraisan’i Madagasikara ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia 2016. Nilaza ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana Rafidimanana Narson, fa mbola misy fanamboarana hatao amin’io lalana mirefy 11km io, ka izay no antony hanakatonana azy. Nambarany fa amin’ny oktobra 2017 any no hisokatra ho azon’ny besinimaro haleha io lalana io.
lundi, 28 novembre 2016 21:18
Notokanana androany ny Passerelle izay natao hanafaingana ny lalana ho an'ireo mpitsabo sy ny tsaboina teny amin'ny hopitaly Befelatanana. Izany moa dia tafiditra ihany koa ho a'ny fankalazana ny faha 90 taonan'ny CHU Befelatanana.
lundi, 28 novembre 2016 09:17
Tsena Mahabibo-Mahajanga : Mpangalatra « moto » saika niharan’ny fitsaram-bahoaka
Niatsena ny tompon’ilay moto ary napetrany teo ivelany io kodiaran-droa io, omaly alahady. Fotoana fohy taorian’izay anefa dia nisy lehilahy iray nanantona ilay moto ary namoaka fanalahidy maro avy any am-paosiny. Raha nahita izany ireo olona teo amin'ny manodidina dia nanantona niaraka tamin’ny polisy monisipaly ary saika hikapoka azy avy hatrany tamin’ny hazo. Natolotra ny polisim-pirenena ao Mangarivotra ilay lehilahy taorian’izay.
lundi, 28 novembre 2016 10:00
Famaranana ny frankofonia : Effets spéciaux
Nampitolagaga ny maro ilay effets spéciaux naseho teo amin'ny Hotel le Louvre omaly hariva.
dimanche, 27 novembre 2016 17:53
Sambava : Ny tompontrano any am-piangonana, ny trano nirehitra
Nitrangan’ny hain-trano teto Ambodisatra 2, Fokontany iray eto Sambava tampon-tanana androany alahady tokony tamin’ny 10ora maraina. Lasa nivavaka ny tompon-trano no nirehitra ny trano, izay manana efitra 4 lehibe. Vetivety foana dia rava ny trano, tsy avotra na dia teo aza ny fanomezan-tanana nataon’ny vahoaka. Manampy trotraka ihany koa ny tsy fananan’ny Faritra SAVA sy ny Fiadidiana ny tanànan’i Sambava fiara mpamonjy voina. Vanim-potoana ilana fitandremana tokoa izao raha ny aty SAVA satria sady migaingaina ny hafanana no be rivotra ihany koa.
dimanche, 27 novembre 2016 13:42
Aranta-Mahajanga : Roa lahy tratra ambodiomby nifoka rongony sy nanendaka
Nanao ezaka ny Polisy eto Mahajanga nahafahana nisambotra ireo mpanao ratsy sy mpifoka rongony mampitaraina ny mponina. Nandritra ny fisavana nataon’ny Polisy dia roa lahy no tra-tehaka teo ampifohana rongony tao Aranta, ary dia noraisi-potsiny. Niaiky koa izy roa lahy fa manendaka ihany koa rehefa mamo rongony, ka eo amin’ny tetezana FITIM no fanaovan’izy ireo izany ary tsy mifidy na andro mazava aza. Natolotra ny Fitsarana omaly sabotsy izy roa lahy ary tazomina amponja vonjimaika.
Page 342 sur 457